Ndị ọkachamara na Semalt na-akọwa ihe mere SEO ji achọ ịghọ otu akụkụ nke ụlọ ọrụ gị
Nchọpụta Nyocha Search (SEO) enweghị ike ime otu ugboro iji nweta ihe ịga nke ọma.Iji nweta nkwado, SEO chọrọ ijikọta n'ime usoro isi nke ijikwa azụmahịa gị.
Afọ iri na ọkara gara aga, onye ọkachamara SEO nwere ike ime ka ịchọta nyocha ọ bụlankasi obi nke ụlọ ya. Ọ ga-eburu okwu ndị kacha mkpa n'isi ya mgbe ọ dịlarị na akwụkwọ, meepụta saịtị, ma mesịa,mepee njikọ na wikis, saịtị isiokwu, na okwu blog - semalt referral fee.
SEO ka gụnyere njikọ ikike na isiokwu dị mkpa. Otú ọ dị, ugbu a,a ghaghị ịkọwapụta ihe dị iche iche nke ndị dị mkpa dịka nhazi nke saịtị ahụ; na ngwaahịa ndị ha bụnyere; otú e si akpọ aha ha. Nke ahụ bụ ihe mere ọ ga-eji wuo ya n'ime ọrụ ndị isi nke azụmahịa gị.
Artem Abgarian, onye isi ahịa ndị na-azụ ahịa nke Ọkachamara ,enye ihe omuma ihe mere SEO choro ka etinye gi n'ime ulo oru gi, na otu i kwesiri isi gbaa ahia ahia ahia.
SEO ugbu a bụ banyere mmetụta
N'ezie, ndị ọkachamara SEO bụ naanị maka ihe mgbapụta ndị a kpaara ókè. SEO chọrọnyocha ihe omimi di iche iche na otutu oge iji mata ihe banyere taxonomy na usoro. A chọrọ ka anyị nyochaa saịtị ahụ mgbe niilena ọ nabatara ndụmọdụ na njikarịcha. Enwere ike imeju ọdịnaya na metadata edepụtara maka ọdịnaya ọhụrụ.
Na-adụ Ndị ọzọ Aka
Ntinye SEO kachasị mkpa bụ ndụmọdụ banyere ọtụtụ ọrụ dịka iwepụọdịnaya nke oge na ịmepụta mpaghara ọhụrụ nke Afrika.
Dịka ọmụmaatụ, onye ahịa jụrụ m ihe mere arụmọrụ nke ngalaba uzommebe bụọ bụghị dị ka atụmanya ahụ si dị. Ntụleghachi nke esemokwu ahụ na-egosi na enweghị ntinye ụgbọelu na-abanye maka engines ọchụchọ.Karịsịa, ọ dịghị ohere maka engines ọchụchọ iji kọwaa usoro onye ahịa na-atụ anya ịkwado maka.
Ndozi nsogbu abụọ a nyere aka na ntụziaka ịmanye okporo ụzọ okporo ụzọgaa n'elu ikpo okwu, nke, n'ikpeazụ, na-aghọ azụta.
Nchegbu a na-egosi ihe na-eme mgbe SEO nabatara ya mgbe e mechachara yanke oru ngo. Ibanye SEO site na mmalite na-ebelata ụgwọ nke nhazi nsogbu ma kwalite omume nke ntụziaka.
Site na Mgbasa Ozi na Ule
Maka ịrụ ọrụ dị irè, SEO ga-etinye aka na nke ọ bụla site na atụmatụna mbido nke oru ngo iji gbuo na nyocha na njedebe. A ghaghị ịkọwa usoro ahụ site nyocha na nyocha ọchụchọ, peeji nkeaha, taxonomy, na igodo. Mmiri dị omimi nke algorithms na bot nwere ike inye ndụmọdụ na mmepe, imewe, na ikpo okwu nhọrọ.
Onye ọ bụla n'ime ihe ndị a pụrụ ime ka ọrụ SEO ma ọ bụ merụọ ya.
Njikọta nke SEO n'ime usoro dijitalụ na azụmaahịa e-azụmahịa na-akwaliteezigbo SEO uru na obere ego.
Ndị Silo bụ ndị iro ọjọọ nke imekorita ebe ọ bụ na ha na-esiri ya ikeNdị ọkachamara SEO iji nyochaa mmekọrịta dị n'etiti ọrụ ma ha na-emetụta ego ha nwetara site na e-azụmahịa na-achọpụta ihe.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ilekwasị anya na arụmọrụ nke ọchụchọ, ị chọrọonye kpebiri SEO nke na-agafe mgbasa ozi, e-azụmahịa, na ọrụ dijitalụ na nzukọ. Ịrụ ọrụonye ọkachamara SEO dị n'ime ya bụ ụzọ kachasị dị irè iji hụ na SEO ga - abụ akụkụ dị mkpa nke ụlọ ọrụ gị.